Fomba hahitana miafina miafina miaraka amin'ny teboka na asterisk - Ikkaro
firosoana >> Software >> Fomba hahitana miafina miafina amin'ny teboka na asterisk
Fomba hahitana miafina miafina amin'ny teboka na asterisk
Azo antoka indraindray Hadinonao ny teny miafinao saingy tadidin'ny mpitety fitetezana anao na dia miafina miaraka amin'ny teboka na asterisk aza izy ary amin'ny farany dia manova azy ianao. Eny, misy fomba maro hahitana an'ity tenimiafiko ity, roa fantatro, mankanesa any amin'ny safidin'ny mpitety anay hahitanao hoe aiza no hamonjeny ny teny miafina ary ny faharoa dia ny fomba izay hampianarintsika tena, tena tsotra ary matanjaka kokoa satria mamela isika hahita tenimiafina voatahiry eny an-tsaha, izany hoe, na dia tsy nitahiry azy ireo aza isika ary mazava ho azy, tsy ao anaty tranokalanay io, afaka mahita azy ireo isika.
Tena ilaina izany raha ohatra miasa amin'ny ekipa ianao ary misy mametraka API amin'ny endrika iray, toy ny amin'ny WordPress, amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mamerina azy io haingana ampiasaina indray any an-kafa.
Avelako ho anao ny horonan-tsary amin'ny fampianarana ny fomba fanaovana azy ary etsy ambany aho manazava ireo fomba roa amin'ny endrika nentim-paharazana (inspecteur sy manager password password)
Hizaha tenimiafina miafina (Fomba entina ampidirina)
Ataoko amin'ny Firefox ny tutorial, fa raha mampiasa Chrome ianao dia mitovy, ny terminology ny menio ihany no miova. Na dia manazava ny fomba hahitana ireo teny miafina voavonjin'ny mpitety tranonkala aza aho taty aoriana, feno kokoa ity fomba ity satria mamela antsika hahita teny miafina miafina amin'ny endrika. Mamelà ahy hanazava, rehefa mampiasa wordpress na script hafa dia misy saha misy apis, sns izay voaaro mba tsy ho hita ny teny miafina. Ary amin'ity fomba ity dia ho hitanao izay voatahiry ao na dia mbola tsy niditra ianao na nanao azy tamin'ny solosaina hafa.
Ireto misy dingana.
Mandeha any amin'ny misy ny tenimiafinay izahay ary tsindrio ny bokotra havanana amin'ireo teboka.
Hisy menio iray ary tsindrio ny singa Inspect. Avy eo ny mpanara-maso.
Tsindrio indroa ny tenimiafin'ny karazana = teny miafina
ary ovainay ho lasa soratra izy io mba haharitra karazana = soratra
Ary efa amin'ity fotoana ity dia ho hitanao ny teny miafina nafenina
Jereo ny teny miafina miafina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpitantana ny tenimiafin'ny browser
Raha mampiasa Firefox ianao en about: safidinao # fiainana manokana ho hitanao izany
Tsindrio eo amin'ny boaty Kaonty voatahiry ary tsy hiseho ny varavarankely miaraka amin'ilay tranokala, mpampiasa ary daty nananganana ny pass.
Farany manome izahay Asehoy ny teny miafinao ary ho hitantsika ny teny miafin'ny tranokala tsirairay. Tsotra be, miaraka amin'ny sahan'ny fikarohana etsy ambony dia afaka mahita mora foana ilay tranonkala tadiavintsika isika.
Amin'ny krôma tena mitovitovy ihany letsy Chrome: // toe-javatra / tenimiafina
Ity fomba ity dia mamaha ny olan'ny tenimiafina izay efa notehirizinay, fa tsy sahala amin'ilay efa nohazavainay tamin'ny horonantsary, tsy afaka mampiseho amintsika teny miafina na API izay napetraky ny hafa amin'ny serivisy iraisana ary afenin'ny karazana saha sy ny fananany izy ireo .
Ahoana ny fomba hamohana finday amin'ny efijery vaky
Ahoana ny fomba fitetezana miaraka amin'ny ip an'ny firenena tadiavintsika amin'ny TOR
Tutorial Anaconda: Inona izany, ny fomba fametrahana azy ary ny fampiasana azy
Ahoana ny fomba hanovana ny latabatra avy amin'ny PDF ho Excel na CSV miaraka amin'i Tabula
Mihodina ny solosainako fa tsy misy hita eo amin'ny efijery
Jupyter Notebook. Tetikasa Jupyter
Sokajy Ny fiarovana ny informatika, Software Ticket navigation
Fanehoan-kevitra 1 momba ny "Fomba hahitana teny miafina miafina miaraka amin'ny teboka na asterisk"
15 Oktobra 2019 amin'ny 1:26 alina
Fetsy tsara. Misaotra!